China N'èzí Omenala 12V Ikanam Flex Acryli Neon Banye-20LPS001 rụpụta na Factory | Meiyi
size: Customizable Agba bọlbụ: acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, odo, acha anụnụ anụnụ
Factorylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ọkachamara ewepụtara iji nweta ọkụ ọkụ LED Neon Lights na akara ngosi Neon na ụwa.
Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa anyị.
–Professional electronic design, nhazi usoro, ịbịaru imewe otu;
–Rich Manufacturing Management, ọrụ ndị ahịa, Ndị ọrụ nwere nkà;
–Anyị ruru eru maka ISO9001, UL, CE ROHS;
- Anyị nwere PVC na Silicone extrusion igwe; -Emechala ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ eletrik LED.
Yancheng Meiyi Arts & Crafts Lọ ọrụ emeela neon na akara LED maka azụmaahịa, ụlọ, na ihe omume kemgbe 2015. A na-arụpụta ihe ịrịba ama niile na CHINA
Nabata na Yancheng Meiyi Arts & Crafts Ụlọ ọrụ!Azụmaahịa kemgbe. Anyị bụ ndị na-eduga soplaya nke oké ọnụ Neon ịrịba ama & Ikanam ịrịba ama maka ụlọ na azụmahịa. Anyị na-eburu ọtụtụ puku ihe ngosi neon maka oge ọ bụla na ọnọdụ. Ma ị na-achọ ụlọ bar neon ịrịba ama ma ọ bụ azụmahịa neon ịrịba ama anyị nwere ya! Ihe ịrịba ama anyị niile na-abịa site na akwụkwọ ikike otu afọ na nkwa dị ọnụ ala. Ọ bụrụ n'ịchọta otu akara ngosi neon ahụ a na-akpọsa na ọnụ ala dị ala kpọọ anyị ma anyị ga-akụ ya. Biko tụlee ụlọ ọrụ kachasị mma.weebụsaịtị:https://d533.goodao.net
Anyị na-enye ndị ọzọ dị ka omenala Neon ịrịba ama na neon Sign Ndozi. Anyị na-enye akara saịtị na ọrụ ọkụ ma ree ma wụnye akara ọ bụla ma ọ bụ ọkụ ịchọrọ.
Unique Acrylic Board dị mma Vibes Neon Sign: Nke a na-acha anụnụ anụnụ "Ezigbo Vibes" Ihe akara akara bụ nka 3D nke na-enwu gbaa ma gbanwee oghere gburugburu ya. Jiri ya iji kpoo ụlọ obibi, ịla azụ na kichin, mee ụlọ mmanya mara mma ma ọ bụ ụlọ egwuregwu egwuregwu. Ọnọdụ maka ịrapara na mgbidi, tinyekwuo mmadụ na ime ụlọ, ụlọ ọrụ ụlọ, ime ụlọ ịwụ, windo, tebụl, na mbara ihu.
Ebube buru ibu Neon Sign Light: ìhè LED tubing n'ịnyịnya iji kpochapụ ndabere plastic. Abụọ-gbapuru oghere maka mfe nghọta (nko nko adịghị gụnyere).
Nke gara aga: Neon akara aka na acrylic-20LPS016
Osote: Neon nwere akụkụ atọ-20LPS015
High Quality OEM Unbreakable Custom ihie ...